တရုတ်သန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်, Hexafluoropropyl methyl အီဖြေရှင်းနည်း, အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူသည် Hfe သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်
ဖေါ်ပြချက်:ပျော်စေကိုယ်စားလှယ်,Hexafluoropropyl methyl အီဖြေရှင်းချက်,အစိတ်အပိုင်းများသည် Hfe သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်,Components ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > Components ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
Components ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ပျော်စေကိုယ်စားလှယ်, Hexafluoropropyl methyl အီဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အစိတ်အပိုင်းများသည် Hfe သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ insulator တွင်လည်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်စင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ non အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အနိမ့်မျက်နှာပြင်-တင်းမာမှုထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HFE အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းဖြေရှင်းချက်အထီးကျန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hydrofluoroether မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Components များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်ကာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် HFE ဆပ်ပြာ Components အစိတ်အပိုင်းများ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအဓိကအားဖြင့်အေးဂျင့်, ကာလဖြစ်ပါသည်နှင့်အရည်ပျော်စေအဖြစ်အသုံးပြုပါကကိုယ့်အရောင်မဲ့,, poisonless...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်စင် တစ်ဦးက Hydrofluoroether (HFE) ရှုပ်ထွေးပြီးအော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ non-အိုဇုနျး-depleting ဓာတုအဖြစ်။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless...
မဟုတ်တဲ့အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး Components အစိတ်အပိုင်းများ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာဈ Non-မီးလောင်လွယ်အလွန်လုံခြုံအရည်တစ်အရောင်, ပွင့်လင်း, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, ့။ အရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာကအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာတစ်ဦးကexcellent ပစ္စည်းအသုံးပြုပုံများ (ရေ Incompatibility) ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်အရောင်မဲ့,, poisonless...
အနိမျ့မျက်နှာပြင်-တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ Components အစိတ်အပိုင်းများ Hydroflurane ထုတ်ကုန်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာကြပါပြီ။...
HFE အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းဖြေရှင်းချက်အထီးကျန် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာခြောက်သွေ့: အလယ်အလတ်ကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်နိမ့်ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖြိုခွဲခြင်းအပူ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခြောက်သွေ့။ Components...
HFE လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ Components အစိတ်အပိုင်းများ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ပေါင်းစည်းမှုပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်၏ပုံမှန် function...
Hydrofluoroether မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းရေး HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။...
Components များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ On-Flammable အရည်ဎ၏ကြင်နာဖြစ်ပါသည်: ရှိတယ်မရှိဘူးစက်နှိုးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကမီးသတ်ဥပဒေအားဖြင့်သတ်မှတ်သောအန္တရာယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မထားဘူး။...
တရုတ်နိုင်ငံ Components ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း
ကြောင့် hydrofluoroether ဒြပ်ပေါင်းများ၏ဓာတုသဘောသဘာဝဖို့က, အရောင်, Non-အဆိပ်သင့်, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ 54 ဒီဂရီကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်စင်တီဂရိတ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့အလွန်နိမ့်သည် ဖြစ်. , ကောင်းစွာကွဲပြားဖြစ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောကွာဟချက်သို့ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ် ကောင်းသောအပေါ်ယံအခွံနှင့်စိုစွတ်စေသောအတူ။ အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို၏သန့်ရှင်းရေးကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ပါတယ်, နှင့်လျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းကောင်းလှ၏, ထိုသို့အားဖြင့်စစ်ဆင်ရေးအာကာသတိုးတက်အောင်, charging ၏အခြေအနေအောက်တွင်သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။
ပျော်စေကိုယ်စားလှယ် Hexafluoropropyl methyl အီဖြေရှင်းချက် အစိတ်အပိုင်းများသည် Hfe သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Components ပြီးတော့အစိတ်အပိုင်းများသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ကားအတွင်းခန်းကိုယ်စားလှယ်